Klopp oo ugu dambeyn gacanta ku dhigay Mane+Macluumaad badan oo ku saabsan dhaq dhaqaaqa ganacsiga dhexmaray Reds iyo Saints – Gool FM
(Liverpool) 27 Juunyo 2016. Sadio Mane waxa uu isniinta soo gaari doonaa Liverpool si uu tijaabada caafimaad ugu maro kahor inta uusan noqon ciyaaryahankii saddexaad ee qiimaha ugu badan ugu yimaado [£30 million].
Southampton waxa ay aqbashay dalabkii ka soo gaaray 24 jirka kaddib wada xaajood dheer, waxa ayna u ogolaadeen dhinaca Anfield in ay sidii riixaan wada hadalka sii loo gaaro go’aan heshiiskiisa ah.
Hadii qodobada heshiiska la isla meel dhigo sida qorhuhu yahay, Mane waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa in uu noqday shaqsigii afraad ee Liverpool ku soo biira tan iyo markii uu majaraha u qabtay Jurgen Klopp, salaasada ayaa ugu soo horeeysay ku dhawaaqis.
Hore waxa Liverpool soo gaaray Marko Grujic, Joel Matip and Loris Karius kahor xilli ciyaareedkiisa ugu horeeya ee buuxa oo uu Klopp hogaamiyo kooxda ka dhisan Merseyside, halka kaliya Andy Carroll (£35m) iyo Christian Benteke (£32.5) ay taariikhda Reds qiime inta xiddiga Senegal ku imanayo ku soo gaaray Anfield.
Mane, oo 15 gool dhaliyey dhamaan tartamada xilli ciyaareedkii ugu dambeeyey – afar ka mida Liverpool – deedna diiwaan gashaday sagaal caawin, ayaa la qabaa in uu Liverpool xawaare ay aad ugu baahnaayeen ku soo kordhiyo duulaankooda.
Klopp waligii waxa uu ahaa mid jecel qaababka weeraryahanka tan iyo labadii sano ee uu ku qaatay Red Bull Salzburg, kahor inta uusan ku soo biirin kooxda ka dhisan xeebta koonfureed ee England 2014. Mane boosaska badan ee uu ka ciyaari karo iyo gambiskiisa, awoodiisa, gaar ahaan ayaa soo jiidatay 49 sano jirka.
Mane oo ka soo baxay kuliyada ku taal Dakar, taas oo hore u soo carbisay dhaliyaha Newcastle Papiss Cisse iyo weeraryahanka West Ham Diafra Sakho ayaa xawaarihiisa waxaa rabtay Manchester United oo isku day day in ay janaayo keento Old Trafford.
Mane waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii shanaad ee gegida St Mary’s ku badasha Anfield saddexddii kal ciyaareed ee la soo dhaafay, qiimaha ay xiddigahaas ugu biireen Reds isku dar waa £92m waxa ayna kala yihiin Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren iyo Nathaniel Clyne.
Saints durba wey heshay badalkiisa , Nathan Redmond oo £11m uga yimi Norwich City.
'Waan jeclaan lahaa in aan waqtigeygii la ciyaaro Ozil'.